သကျတနျ့ခြို: November 2009
ရွာတွေနှင့် အတော်အလှမ်းဝေးသည့် မြေကွက်လပ်တွင် ကလေးတသိုက် ဆူညံစွာ ဆော့ကစားနေကြ၏ ။ ကလေးဟုဆိုပေမယ့် အသက်တွေကတော့ ၁၃ နှစ် ၁၄ နှစ်အရွယ်လောက်တွေ ဖြစ်သည် ။ ကျေး လက်တောရွာဆိုတော့လည်း ထိုအရွယ်သည်နှပ်ချေးတွဲလောင်းနှင့် ဆော့ကောင်းတုန်း အရွယ်ပင် ။ က လေး တစ်သိုက်တွင် စုစုပေါင်း ၅ ယောက်ပါဝင်၏ ။ အောင်ဘု ၊ ထွေးညို ၊ မဲလုံး ၊ မှဲ့ကြီး ၊ ချိုကြီး တို့ဖြစ်ကြ၏ ။ ချိုကြီးဆိုသည်မှာ ကျနော့နာမည်ကို အဖျားဆွတ်၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းပင် ။ နောက်ကာလကြာလာတော့ ချိုကြီးမှ ဂျိုကြီးဖြစ်သွားလေ၏ ။ ထိုအဖွဲ့တွင် ကျနော်က အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်လေ၏ ။ ၁၀ နှစ်သာသာ လောက် ပဲရှိအုန်းမည်။ ကျား ၃ ယောက် မ ၂ ယောက်ဖြစ်၏ ။ ကစားနည်းကတော့ ဂုံညင်းဒိုးပစ်တိုင်း ကစား နေခြင်းပင်ဖြစ်၏ ။
အချိန်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းမှောင်လာ၏ ။ ရွာ အခေါ်အဝေါ်တော့ နွားရိုင်းသွင်းချိန်ပေါ့ ။ နွားရိုင်းသွင်းချိန်တွင် အိမ်ရှိလူကြီးများက ကလေးများအား အပြင်သို့ထွက်ခိုင်းလေ့မရှိပေ ။ ရွာလယ်ခေါင်တလျောက် နွားအုပ် ကြီးဝင်လာချိန်တွင် တစ္ဆေ သရဲများ ကပ်ပါလေ့ရှိသည်ဟု အယူရှိသောကြောင့်ပင် ။ ကျနော်တို့ကတော့ လူဆိုး တစ်သိုက်မို့ အပြင်ကိုရောက်ရှိနေလေသည် ။ ဆောင်းတွင်းကာလမို့ အလင်းရောင်နဲနဲမှောင်လာသည်နှင့် မြူတွေက ဝေ့၀ဲလာလေ့ရှိသည် ။ တစ်စ တစ်စ နှင့် အရာရာသည် မပီဝိုးတ၀ါး ။ ကလေးတစ်သိုက်ကတော့ ဇွဲကောင်းစွာနှင့် ဆော့ကောင်းတုန်းပင် ။ ထိုအခိုက် တောင်စောင်းတနေရာမှ စူးစိုက်ကြည့်နေသော မျက်ဝန်း တစ်စုံကိုတော့ သူတို့ သတိမထားမိလိုက်ချေ ။
ရုတ်တရက် ကျနော်ပစ်လိုက်သော ဂုံညင်းက အရှိန်ပြင်းကာ မြေကွက်လပ်ကိုကျော်ပြီး တောင်စောင်း တလျောက် အောက်က လျှိုကြီးထဲသို့လိမ့်ကျသွားလေ၏ ။ ကိုယ့်ဂုံညင်းဒိုးဆိုတော့ ပူထူသွားမိ၏ ။
(ဟာကွာ သွားပါပြီ အောက်ကိုကျသွားပြီ အောင်ဘုရ မင်းကလည်းကွာ သေချာမဖမ်းဘူး ဆင်းရှာရအောင်ကွာ )
(ဟေ့ကောင် ချိုကြီး အချိန်ကိုလည်းကြည့်ဦး မှောင်နေပြီကွ အိမ်ကဆူလိမ့်မယ် ပြန်ကြရအောင်ကွာ )
(ဟာကွာ..အဲဒီဂုံညင်းက ကံကောင်းတယ်ကွ .. ငါမရရအောင်ပြန်ရှာမယ် ကြောက်တတ်တဲ့လူနေခဲ့ကွာ...)
(ချိုကြီး မင်းသေချာစဉ်းစားအုန်းနော် ဒီလျှိုကအရမ်းနာမည်ကြီးတာ ညညဆို မီးစုန်းတွေလည်း ပေါမှပေါ )
(ပေါ ပေါကွာ... ငါတော့ဆင်းပြီ မင်းကြောက်တတ်ရင်နေခဲ့ ... )
(ဟ ဖြစ်မလားကွ သွားမယ့်သွား အတူသွားမှာပေါ့ )
ဟုဆိုကာ သူတို့ ငါးယောက်စလုံး လျှိုကြီးထဲသို့ တောင်စောင်းတလျောက် စ၍ ဆင်းလာခဲ့၏ ။ တော်ပါသေးရဲ့ အိမ်မှ အောက်လင်းဓါတ်မီးလေးယူလာခဲ့မိလို့ ။ သူတို့ကစားပြီးပြန်လာလျင် မှောင်လေ့ရှိသောကြောင့် ခွေးရန်မှကာကွယ်ရန် ဓါတ်မီးကို ဆောင်လာခြင်းဖြစ်၏ ။
(ဟေ့ကောင်ဖြည်းဖြည်း ဆင်းပါကွ ဓါတ်မီးကိုင်ပြီး ရှေ့ကနေ အရမ်းဆင်းနေတယ် )
ဟုအောင်ဘုက လှမ်းပြော၏ ။ တယောက်နောက်ကျောမှ အင်္ကျီကို တယောက်ကိုင်ကာ ငါးယောက်တန်းပြီး ဆင်းလာခြင်းဖြစ်သည် ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး မှောင်အတိကျသွားလေ၏ ။ တချက်တချက် ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူလိုက်သော ရွာသင်္ချိုင်းမှ ခွေးအူသံမှအပ အရာအားလုံးသည် ခြောက်ခြား ဖွယ်ကောင်း လောက်အောင်ပင် တိတ်ဆိတ်နေ၏ ။
(ဟေ့ခဏနေဦး ငါတို့နောက်မှာ အကောင်တကောင်ကောင်လိုက်လာနေသလိုပဲ အသံကြားနေရတယ် )
ဟု အောင်ဘုကဆိုလိုက်ရာ ထွေးညိုက
(နင်ကလည်းဟာ မခြောက်ပါနဲ့ဟာ ကြောက်ရတဲ့ကြားထဲ )
ဟုဆို၏ ။ ပြောရင်းထွေးညိုအောင်ဘုနောက်သို့ ကြည့်လိုက်ရာ အနီရဲရဲမျက်ဝန်းတစ်စုံ လှစ်ကနဲပျောက် ကွယ်သွား၏ ။ အောင်မလေးဟုဆိုကာ ထွေးညိုပြေးထွက်မည်ပြုသဖြင့် မနဲဆွဲထားရ၏ ။
(နင်ကလည်းဟာ ဇီးကွက်တွေဘာတွေ ဖြစ်မှာပေါ့ )
ဟု ကျနော်ပြောသာပြောလိုက်ရသော်လည်း စိတ်ထဲကတော့ သိပ် မသင်္ကာချင်ပေ ။ သူတို့ကြောက်မှာစိုး၍ မပြောခြင်းသာ ။ ကျနော်တွေ့တာတောင် ၂ ခါ ၃ ခါရှိနေပြီ ။ လမ်းတွေကလည်း ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိ ။ အစကတော့ဇွဲနှင့် အခုတော့ နဲနဲလည်းချမ်းလာပြီဖြစ်၏ ။ စိတ်ဓါတ်ကကျ ချင်နေပြီ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ကိစ္စမို့ မာန်တင်းထားရ၏ ။
ထိုအခိုက် ဘွားကနဲ မြေကွက်လပ်ကြီးတွင်တွေ့လိုက်ရသော အိမ်အိုကြီးကြောင့် သူတို့တဖွဲ့လုံး လန့်ဖြန့်သွားမိ၏ ။ အဝေးကကြည့်လျင် လရောင်အောက် မြူခိုးတွေကြား ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသော တစ္ဆေ တစ်ကောင်နှင့် တူလှ၏ ။ ဘေးနားက ညောင်ညိုပင်ကြီးကလည်း အသည်းယားဖွယ်ပင် ။ သရဲသဘက် လက်ချောင်းများနှင့် ဆင်တူလှ၏ ။
(ဟေ့ကောင်တွေ အဲဒီအိမ်ကြီးကို သွားကြည့်ရအောင်ကွာ ဟိုမှာ မီးလင်းနေတယ်တွေ့လား )
(အာ ချိုကြီးရာ မင်းကွာ ပြဿနာ အတော်ရှာတာပဲ ငါတို့ကြောက်တယ်ကွ)
( ငါလည်းကြောက်တာပဲ အဖော်တွေနဲ့ပဲကွာ ဘာဖြစ်လည်း )
ကျနော်တို့ပြောဆိုနေကြတုန်း မိန်းကလေး ၂ ယောက်ကတော့ ဒူးတွေပင် တုန်နေပြီ ။ ထိုအခိုက် အိမ်အိုကြီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ စောစောကလင်းနေသော မီးရောင်က ဖျက်ကနဲဆို မှိတ်သွားလေ၏ ။ မတိုင်ပင်ထားပဲ ငါးယောက်စလုံး ပြိုင်တူ ကြက်သီးထမိသွား၏ ။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဦးဆောင်၍ ရှေ့မှသွားလေ၏ ။ အိမ်ကြီးသို့ရောက်ခါနီး ၁၀ ကိုက်လောက်အလိုတွင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပုပ်စော်နံ့နံလာ၏ ။ ရုတ်တရက်တစ်စုံတစ်ခုကို တိုက်မိပြီး ကျနော် မှောက်ရက်သား လဲကျသွား၏ ။ ဓါတ်မီးကရှေ့လှမ်းလှမ်းမှ မြက်ပင်တွေကြားထဲမှာ ။ ဓါတ်မီးအလင်းရောင်အတိုင်း ပြိုင်တူကြည့်မိတော့ လားလား.... နွားသေကောင်ကြီးထဲမှ အူတွေက အခွေလိုက်ထွက်ကျနေ၏ ။ ဘေးမှာလည်း ယင်ကောင်တွေက တ၀ုန်းဝုန်း ။
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို ( ၁၁း၂၀ ည ၃၀.၁၁.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 11:56 AM 10 comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:01 AM6comments:
ပထမဦးဆုံး ခရီးဆုံးထိရောက်ဖို့ကိုတော့ သင်အားမွေးထားရမယ်နော်... ။
ပထမဆုံး တောင်ကုန်းပေါ်ကို ဒီလို ကောင်းကင်ရထားတွေနဲ့ အရင်သွားကြရမယ် ။ အောက်ကိုတော့ ငုံမကြည့်မိစေနဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ အသူရာ ချောက်တွေရှိတယ် ။
သင့်ရှေ့တည့်တည့်ကလူကိုပဲ တစိုက်မတ်မတ်ကြည့်ပါ ။ ဘေးဖက်ကိုယောင်လို့တောင်မကြည့်မိစေနဲ့ ။ မူးဝေပြီး ပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ် ။ စွန့်စားလိုသူတို့ အကြိုက်ပေါ့နော် ။
အကယ်၍ သင့်အရှေ့ကလူက ကိုယ့်ဆီကိုပြောင်းပြန်ပြန်လာနေရင် သတိထားပါ ။လမ်းကကျဉ်းလွန်းတဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ် ။
ဆက်ပြီးကြိုးစားထားကြ သူငယ်ချင်းတို့ နောက် အဆင့်အနည်းငယ်ဆို စားသောက်ဆိုင်ကို ရောက်ပါတော့မယ် ။
ဒီနေရာကတော့ အသဲငယ်သူတို့ လှည့်ပြန်ရမယ့်နေရာပါပဲ ။ အပေါက်လေးတွေထဲကို ခြေချောင်း တွေထည့်ပြီးသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အောက်ဖက် ကကျောက်ကမ်းပါးကတော့ အလွန်ကို နက်ရှိုင်းပါတယ် ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းအတိုင်းပါပဲ ။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် လမ်းကိုဖြတ်သန်းပြီးမှ ဒီစား သောက်ဆိုင်လေးကိုရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အကယ်၍သင်ရောက်အောင်သွား နိုင်ခဲ့လျှင် အစားအ သောက် အား လုံးက Free (ဖရီး) ဖြစ်ပါတယ် ။
ကဲသူငယ်ချင်းတို့ ဘယ်သူတွေလိုက်ကြမလဲ ဒီကအစားအသောက်တွေဘယ်လိုအရသာရှိလည်းဆိုတာ သွားပြီး မြည်းကြည့်ရအောင် ...သွားကြမယ်ဟေ့ !!!!!
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို (၁၀း၀၀ ည ၂၇.၁၁.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 3:19 PM 20 comments:
မိုးလေးကတဖွဲဖွဲ.... ။ အိပ်ရာထဲကနေ မထချင်ထချင်နဲ့ ဒီနေ့ဂျူတီဆင်းရမှာမို့ ထလာခဲ့၏ ။ အင်း လိုလိုပိုပို ပုဆိုး တစ်ထည်လောက်တော့ ယူသွားအုန်းမှ ။ အမှန်က သင်္ကြန်တောင်နီးနေပြီ ။ ဘာကြောင့် အခုထိ မိုးကကောင်းနေသလဲ ဆိုတာ သူ စဉ်းစားမရတော့ပေ ။ အချိန်က ခွဲစိတ်ဆောင်မှာ ပို့စ်တင်ဆင်းနေတုန်းကဖြစ်သည် ။ ပထမဆုံး ဂျူတီမို့ ထုံးစံအတိုင်း လူက တက်ကြွနေ၏ ။ ကျွန်တော်က ဆေးကျောင်းကတည်းက ချုပ် တာ လုပ်တာတော့ ၀ါသနာပါလေသည် ။ ဒါကြောင့်ပဲလားမသိ အိမ်မှာ အ၀တ်တစ်ထည်ထည်ပြဲနေပြီဆိုလျှင် ကျွန်တော့ကိုသာ ချုပ်ခိုင်းတော့၏ ...ဟီး ။ ခွဲစိတ်ဆောင်မှာ ပို့စ်တင်ဆင်းတုန်းက ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှာ ယောက်ျားလေးချည်း လေးယောက်ပါလေသည် ။ ဒီတော့ အကုန်လုံးက လူနာတစ်ယောက်လာပြီဆိုလျင် လုပြီး ချုပ်ကြမည့် လူတွေချည်းပဲပင် ။
ဆေးရုံရောက်တော့ အေအက်စ်က round နေလေပြီ ။ ကိုယ်လည်း ကုပ်ကုပ်လေးလုပ်ပြီး စာအုပ်လေးကိုင်ကာ မယောင်မလည်သွားရပ်ရလေသည် ။ ဇာတ်လမ်းက အဲဒီမှာ မစသေး ။ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်ပြန်ပြီး ညဖက်ရောက်မှ စလေတော့သည် ။ ထိုနေ့ညက မှတ်မှတ်ရရ မီးကလည်း သုံးခါတိတိပြတ်၏ ။ လူနာက အသစ် အယောက် ၂၀ တက်လေ၏ ။ ကွဲတာပြဲတာက ၁၀ ယောက်ကျော်ပါလေသည် ။ သင်္ကြန်နားနီးလာသည်ထင့် ။ စစပိုင်းတော့ သကောင့်သားတွေက လုပြီး သူချုပ်မယ် ငါချုပ်မယ်ပေါ့ ။ နောက်လည်းကျရော ကဲပါဘဲကြီးရာခင်ဗျားက အသက်လည်း ကျွန်တော်တို့ထက် ကြီးတယ် ( အမှန်ကလပိုင်းလောက်ကြီးတာပါ) ၀ါလည်းရင့်တယ် ( ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိ) အဲဒီတော့ ၂ ချက် ၃ ချက်လောက်ဆို ကျွန်တော်တို့ချုပ်မယ် ဟဲဗီးကေ့စ်ဆို ဘဲကြီးကိုလွှဲပေးမယ်တဲ့ ။ ကဲကောင်းရော... ။လွယ်တာကိုတော့ သူတို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘော ။ ကဲလေ ထားပါတော့ ချုပ်ဆိုတော့လည်း ချုပ်ပေါ့ ဟီး ။ ကံကလည်း ကိုယ့်ဖက်ကို ပါပါတယ် ။ ဟဲဗီးကေ့စ်ချည်း ၈ ယောက်လောက်လာတယ် ။ အနဲဆုံး က ၅ချက်လောက်ချုပ်ရတဲ့ ရိုက်မှုတွေချည်းပဲ ။ စစချုပ်ချင်းတော့ သိတယ်မဟုတ်လား ။ လက်ကတုန်ပြီးသား ။ ဘေးကလည်း ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့ သကောင့်သားတွေက အများကြီး ။ နောက်ပိုင်းလည်းကျလာရော ရေချိန်ကိုက်လာသလိုမျိုး လက်ကသွက်လာတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ၁၁ နာရီထိုးခါနီးလည်းကျရော ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ ပြီးသလောက်ဖြစ်သွားလေ၏ ။ ဒါနဲ့ အကယ်၍ ညဖက် ခွဲခန်းဝင်ရရင် ဘယ်သူတွေဝင်မလဲဆိုတာကို ထုံးစံအတိုင်း ဖဲလေးရိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြလေသတည်း ။
ပြောရအုန်းမယ် .. ။ ဖဲရိုက်တဲ့အကြောင်းကို ။ ဆေးကျောင်းသားတွေမှာ စာအရမ်းကြိုးစားပြီး ( ကျွန် တော်တို့အခေါ် စာဂျပိုး -ဟိုက်ပါ) တွေမှလွဲ၍ ကျန်သည့်ကျောင်းသား အကုန်လုံးလိုလိုက ဖဲရိုက်တာ အနည်းနဲ့အများဝါသနာ ပါတဲ့သူတွေချည်းပဲပင် ။ ကျွန်တောကတော့ ၀ါသနာပါသည်လည်းမဟုတ် မပါဘူးလည်း မဟုတ် ၀ိုင်းစရင်တော့ ပါစမြဲပင်ဟီး ။သိပ်တော့လည်းကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင်မရှိလှပါ ။ ရှမ်း စင်ကာပူ ဘူကြီး ရှိုး ဒေါင်း ပိုကာ ဒီလောက်သာလျှင်တတ်လေ၏ ။ လက်ဦးဆရာကတော့ ဟို ဂျပုပါ ။ သိပြီးသားဖြစ်မှာ ပါ အပိုင်း ၄ မှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့သူငယ်ချင်းပါ ။ ပြောမနာဆိုမနာပေါ့ ။ လူက ရှမ်းဆို ပွဲတိုင်းရှုံး၏ ။ ကျန်တာတော့ပြောမနေနှင့် ပါသမျှ မုန့်ဖိုးအကုန်ပြောင်၏ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ကို သူတို့အကုန်လုံး ကြောက်သည့်အရာတစ်ခုရှိ၏ ။ ဘူကြီးကစားခြင်းပင် ။ လူကဘယ်လောက်ထိဘူနေမှန်းမသိ ဘူကြီးကစားတိုင်း နိုင်လေသည် ။ ဒီတော့ ဘဲကြီးနှင့်ဘူကြီးကစားလျှင် မကစားကြတော့ဟု ကြေငြာကြလေတော့သည် ။ အဲဒီလောက်ထိအစွမ်းထက်ခဲ့တာ...ဟီး ။ အဲဒါနဲ့အဲဒီညက ကစားတော့ ကျွန်တော်ရှုံးလေ၏ ။ ဒီတော့ သူတို့ပဲ အကယ်၍ ခွဲစိတ်လူနာလာလျှင် ၀င်ကြမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြလေသည် ။ အမှန်က နေ့လည်ပိုင်းဆို လုဝင်သည့် လူများသည့်အတွက် အေးအေးဆေးဆေး အနီးကပ် ကြည့်ခွင့်မရ ။ ထို့ကြောင့် ညဖက်ဆိုလျင် ဆရာနှင့်ကိုယ် ၂ ယောက်တည်း ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ကြရလေသည် ။
ဆုတောင်းကလည်း ပြည့်ဝပါသည် ။ လူနာတစ်ယောက် ဗိုက်အောင့်သည် ဟုဆိုကာ ဆေးရုံသို့ရောက်လာ၏ ။ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ Perforation ( အစာအိမ် ပေါက်ခြင်း)ဖြစ်လေသည် ။ ထိုအချိန်ထိ ဟို ကံစမ်းမဲပေါက်သော သကောင့်သားတွေက တစ်ယောက်မှ မနိုးသေး ။ ကိုယ်ကတော့နိုးနေပြီ ဒါနဲ့ သူတို့ကို တာဝန်အရ ဟေ့ကောင် ဟိုမှာ လူနာလာနေပြီ ခွဲခန်းဝင်ရမယ်ထင်တယ် ထပြီးကြည့်ဦး ဆိုတော့ သကောင့်သားက အာ...ဘဲကြီးရာကျွန်တော်အိပ်ရေးပျက်နေတယ်ဟီး ဘဲကြီးပဲဝင်လိုက်ပါ နော်... အားကိုးပါတယ် ဟီး တဲ့. ။ ကဲ ပွဲသိမ်းရော...။ ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း ပြင်ဆင်ဆရာရှိတာပြင်ဆင်ပြီးဆရာနှင့်ကိုယ် နှစ်ယောက်တည်း ခွဲခန်းဝင်ရလေသည်။ ထိုနေ့မှ AS ကလည်း ညနေဖက်မှ ဗိုက်အောင့်သည်ဟုဆိုကာ အိမ်မှာနားနေရန် ဆရာကခွင့်ပြုလိုက်လေသည်။ ဆရာကသူ့အခန်းကနေ အပေါ်ထပ်ကနေတိုက်ရိုက် ခွဲခန်းသို့သွားလေသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဆောင်အောက်ဆင်းပြီးမှ အောက်ဖက်လမ်းကြောင်း အတိုင်း(လူနာကိုတွန်းပို့သည့်လမ်းကြောင်း) မှဝင်သည် ။ ဒီမှာတင် .. လူနာကိုလိုက်ပို့သည့် အယောက် ၂၀ ခန့်လူအုပ်ကြီးနှင့် ပက်ပင်းတိုးလေသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့က အ၀င်ပေါက်ကို ပိတ်ထားသည့်အတွက် ... ကဲ..ကဲ ခဏလောက်ဖယ်ပေးကြပါခင်ဗျာ အထဲလေးဝင်ချင်လို့ပါလို့ ဆိုလိုက်ရာ အားလုံး က ကျွန်တော့်ကိုဝိုင်းကြည့်ပြီး ဟဲ့ဟဲ့ဘေးဖယ် ကြစမ်း ဟိုမှာ ဆရာလာနေပြီ ဆရာ ရယ်ကျွန်တော့တူလေးကို ကယ်ပါဦးဗျာနော်...။ ဗျာဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမှာပါ ဆိုပြီး အတင်း ၀င်ခဲ့ရလေသည်။ ဆရာဝန်ဆို၍ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဒီအပေါက်ဝင်လာခဲ့၍ ကိုယ့်ကို ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟု ထင်နေပုံပင် ။ ကဲထားတော့ အထဲဝင်ပြီး အ၀တ်အစားလဲပြီးတော့ ခွဲစိတ်ခန်းသို့ဝင်လေတော့သည်။ လူနာက အစာအိမ်အနာရှိပြီး ပျော်ပွဲရှိ`၍ အရက်သောက်မိသည်ဟုပြော၏ ။ ထိုမှတဆင့် အနာက ပေါက်ထွက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်၏ ။ အစာအိမ်ပေါက်သည့်နေရာကို ခွဲထုတ်ပစ်ပြီး အူ(Duodenum ) နှင့်ပြန်ဆက်ပေးရ၏ ။ Gastro-duodenostomy ဟုခေါ်၏ ။ ဆရာကလည်း ခွဲစိတ်တာ အတော့ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လေသည်။ ကျွန်တော့ကို အသေးစိတ်လည်းရှင်းပြ၏ ။ ဒီလိုနဲ့ ၁ နာရီခွဲလောက်ကြာတော့ ဗိုက်ပြန်ပိတ်လေသည်။ ဒီမှာတင် ဆရာက အရေပြားကို တစ်ဝက်လောက်လည်းချုပ်ပြီးရော မင်းချုပ်တတ်တယ်မဟုတ်လား ဆက်ချုပ်လိုက်တော့ဟု ဆိုတာ ထွက်သွားလေတော့သည်။ လေး ငါးချက်လောက်ပဲ ဆက်ချုပ်စရာ ရှိလေသည်။ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာအားရ ( ရခဲလှသည့် အခွင့်အရေးမဟုတ်လား ) ဆက်ချုပ်လေတော့သည် ။ အားလုံးပြီး၍ အ၀တ်အစားလဲပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ (ဆရာ ဆရာ ကျွန်တော့တူလေး ဘယ်လို အခြေအနေရှိလည်းဟင်) ( အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့အောင်အောင်မြင်မြင်ပဲခွဲစိတ်နိုင်ပါတယ်) (ဟာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရယ် ..ကဲကဲ ဆရာ့ကိုလိုက်ပို့ကြရအောင်ဟေ့ ကျန်တဲ့လူတွေဒီမှာနေခဲ့ တစ်ဝက်က ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြ) ( ဟာ ရပါတယ်ခင်ဗျ နီးနီးလေးပဲ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းသွားလည်းရပါတယ် )( အာ မဟုတ်တာပဲဆရာရယ်...လမ်းက လူမှမရှိတာ ) ဆိုပြီး လူဆယ်ယောက်ခန့် ကျွန်တော်တို့နားသည့် ဟောက်ဆာဂျင်အခန်းထဲသို့ လိုက်ပို့လေသည်။ မနက်လည်းရောက်ရော ဟိုကောင်တွေကို ဒီအကြောင်းပြောပြတော့ (ဟာကွာ နာလိုက်တာ တောက် ..အအိပ်မက်လိုက်တာ လွဲသွားတယ် ) ဆိုပြီး ယူကျုံးမရ ညဉ်းကြလေတော့သည်။ ကောင်းတယ် ဒီလောက်တောင် အခွင့်အရေးပေးတာတောင် အအိပ်မက်တဲ့ကောင်တွေ...ဟီး ။
ဒီလိုနဲ့ သင်္ကြန်ကျလာပါလေရော ။ သင်္ကြန်ဆိုတော့ ဆေးရုံကို လာလိုက်ကြသည့် လူနာတွေ မူးပြီးရန်ဖြစ်ကြသည့်လူတွေချည်းပဲပင် ။ သင်္ကြန်တစ်ရက်မှာ ဂျူတီတစ်ရက်ဆင်းရလေသည်။ ဟေ့ NA လာတယ်ဟေ့ သွားကြည့်လိုက်ဦး ဆိုတော့ ဟိုသကောင့်သား သုံးယောက်က လှစ်လှစ် လှစ်လှစ်နှင့် ပြေးထွက်သွားကြသည် ။ အစပိုင်းဆို အဲဒီလိုတွေချည်း ။ နောက်မှသာ ....ဟင်း ။ ကျွန်တော်သွားကြည့်တော့ ဟဲဗီးကေ့ဖြစ်နေ၏ ။ လူနာကိုကြည့်တော့ လားလား အစ်ကိုဝမ်းကွဲပါလား ။ ဟေ့ကောင် ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလည်း မေးတော့(ညီအစ်ကိုချင်း အသက်သိပ်မကွာ၍ မင်းနှင့် ငါနှင့်သာပြောပါသည်) မသိ ပါဘူးကွာ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းကို ..တဲ့ ။ ရှင်းရောသူပြောမှ ။ ကဲကဲထားတော့ သူကတော့ လမ်းမှာ ဂိုဏ်းနှင့်နေသည်ဟုပြောသည် (ဘာဂိုဏ်းမှန်းမသိ သူတို့က သိုင်းလောကသားတွေလေ အားနေအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ရန်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ကောင်တွေ အခုတော့ အဲဒီကောင်လည်း တပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ သူတို့ ညီအစ်ကိုကို ဇော် ၂ ဇော်ဟုခေါ်လေသည် ။ ဇော် ၂ ဇော် ၏ပေါက်ကရလုပ် တတ်ပုံများကို နောက်မှ ပြောပြပါမည်)
ဒီတော့ သူရန်ဖြစ်တာသိပ်မဆန်းလှ ။ ငါပဲချုပ်လိုက်မယ် ဟေ့လို့ပြောလိုက်တော့ အကုန်လုံး က စကားနားထောင်ပုံရသည် ။ ဖယ်ပေးကြလေသည်။ သိတယ်မဟုတ်လား ဟဲဗီးကေ့စ်လေ ဟီး ။
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို(၁၁း၄၀ ည ၂၆.၁၁.၀၉)
ကျွန်တော်နှင့်ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀ (အပိုင်း ၁)
ကျွန်တော်နှင့်ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀ (အပိုင်း ၂)
ကျွန်တော်နှင့်ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀ (အပိုင်း ၃)
Posted by သက်တန့်ချို at 3:11 PM 12 comments:
စုန်ချည် ဆန်ချည် ကူးခတ်ဖူးတယ်.....
Posted by သက်တန့်ချို at 9:58 AM3comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:05 AM3comments:
ဗီတာမင် B1 ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သော သူငယ်နာရောဂါ (Beri Beri)
ဗီတာမင် ဘီဝမ်း ဆိုတာဘာလဲ ?
ဗီတာမင် ဘီဝမ်းကို သိုင်ယာမင်း (Thiamine ) လို့ခေါ်ပါတယ် ။ သူက ကစီဓါတ်တွေကို ဖြိုခွဲဖျက်ဆီး တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ အကူပစ္စည်း Co-Enzyme အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် ။ Acetylcholine တွေဖြစ်ပေါ် လာဖို့အတွက်လည်း ဘီဝမ်းဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် ။ Acetylcholine ဆိုတာကတော့ Peripheral nervous system နဲ့ Central nervous system မှာ neurone တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ neurotransmitter အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ် ။
Beri Beri သူငယ်နာရောဂါဆိုတာဘာလဲ ?
ဘယ်ရီဘယ်ရီဟာ ကလေးငယ် အသက် ၂ လမှ ၃ လအတွင်း တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ အမေက ဘီဝမ်းဓါတ်ချို့တဲ့နေခဲ့ရင်နို့စို့ကလေးငယ်တွေမှာ သူငယ်နာရောဂါ Beri Beri ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။
Beri Beri ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ ?
၁ ။ နှလုံးနှင့်ဆက်နွယ်သော Cardiac form
ကလေးငယ်ဟာ အကောင်းကြီးကနေ ရုတ်တရက်ပြာနှမ်းလာတတ်ပါတယ် ။ ကလေးဟာ မောပန်းနေပြီး နှလုံးခုန်းနှုန်းတွေဟာလည်း မြန်နေပါမယ် ။ အနည်းဆုံး တစ်မိနစ်မှာ နှလုံးခုန်နှုန်း ၁၀၀ အထက်မှာ ရှိနေပါမယ် ။ ကလေးဟာ အသက်ရှုတဲ့နေရာမှာ ရှိုက်ရှိုက်ပြီးရှုနေရခြင်း ၊ မျက်နှာဖောင်းလာခြင်း ၊ ရောင်ရမ်းလာခြင်း ၊ အသဲကြီးလာခြင်း ၊ ဆီးသွားနဲ လာခြင်းတို့နဲ့ တွဲတွေ့ရပါတယ် ။
၂ ။ အသံနှင့်ဆက်နွယ်သော Aphonic form
၂၄ နာရီကနေ ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ ကလေးဟာ ဆက်တိုက် ငိုလာနေရင်းကနေ တဖြည်းဖြည်းအသံတိမ်ဝင်လာပြီးနောက်ဆုံး အသံလုံးဝပျောက်သွားပါမယ် ။
၃ ။ ဦးနှောက်နှင့်ဆက်နွယ်နေသော Pseudomeningitic form
ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း ၊ တက်ခြင်း ၊ သတိလစ်ခြင်း ၊ မေ့မျောနေခြင်းတို့နဲ့ တွဲတွေ့ရပါတယ် ။
Beri Beri မှန်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
၁ ။ ဘီဝမ်းတိုက်ကျွေးကြည့်ခြင်း (ယျေဘူယျအခြေအနေပြန်ကောင်းလာမယ် ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းပုံ မှန်ပြန် ဖြစ်သွား မယ် ၊ အသဲအရွယ်အစားပြန်သေးသွားမယ် ၊ ၂ နာရီအတွင်းဆီးပြန်သွားမယ် ) ဒါဆိုရင်တော့ ကလေးဟာ ဘီဝမ်းချို့တဲ့လို့ ဘယ်ရီဘယ်ရီဖြစ်နေတယ်ပေါ့ ။
၂ ။ သွေးစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Lactic acid နဲ့ Pyruvic acid level တွေမြင့်တက်နေခြင်း
၃ ။ သွေးနီဥဆဲလ် Transketolase လျော့နည်းနေခြင်း
Beri Beri ကိုဘယ်လိုကုသမလဲ ?
အမေရော ကလေးရော တပြိုင်တည်းကုသရပါမယ် ။ ကလေးကို Vitamin B1 50mg ကို အသားဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးပေးပြီး နောက်ပိုင်း ပါးစပ်ကနေ ဘီဝမ်းဆက်လက် တိုက်ကျွေးပါတယ် ။ အမေကို Vitamin B1 50mg ပါဝင်တဲ့ဆေးပြား သို့မဟုတ် B complex ပါဝင်တဲ့ဆေးပြား တစ်နေ့တစ်ပြားနေ့စဉ် ပုံမှန်တိုက်ကျွေးပါတယ် ။
Beri Beri ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
အမေက အထူးသဖြင့် ဗီတာမင်ဘီဝမ်းပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို လုံလောက်မျှတစွာ စားသုံးပေးရပါမယ် ။ (ဥပမာ ၀က်သား ၊ မြေပဲ ၊ ပဲအမျိုးအမျိုး ) ။
ဘီဝမ်းဓါတ်ကို ဆုတ်ယုတ်စေတဲ့ ချေဖျက်ပေးတဲ့ Thiaminase ပါရှိတဲ့ ငါးတွေကိုတော့ ရှောင်ရှားရပါမယ် ။
စားရေးသူ.....သက်တန့်ချို (၁၀း၀၀ ည ၂၃.၁၁.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 9:39 AM2comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:38 AM5comments:
ကျွန်တော်တို့ သိထားတဲ့ သတ္တ၀ါတွေထဲက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး အရောင်ပြောင်းတတ်တဲ့ အကောင်ဆိုရင် ပုတ်သင်ညိုပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဒီတောနက်ထဲက သတ္တ၀ါတွေကတော့ ပုတ်သင်ညို အနွယ်ဝင်တွေလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ် ။ တစ်ချို့ဆိုရင် သစ်ကိုင်းတွေနဲ့ ခွဲခြားလို့ မရအောင်တူလွန်းတဲ့ အတွက် အမှတ်တမဲ့ကြည့်မယ် ဆိုရင် သတိမှုမိမှာ မဟုတ်ပဘူး ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ စွမ်းအင်ပေါ့နော် ။ အန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် လူတွေကတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုလိုက်ပြီး အဲဒီလိုသာ အရောင် ပြောင်းနေမယ်ဆို ရင်တော့.......................။
ဒီအကောင်ဆို ခွဲမရအောင် သစ်ကိုင်းနဲ့ တူတယ်နော်.. ။
စာရေးသူ....သက်တန့်ချို (၁၁း၄၀ ည ၂၀.၁၁.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 10:49 AM 8 comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:01 AM9comments:
Australia ရှိ Sydney မှာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ မိုနာလီဇာပုံပန်းချီကားချပ်ကို ကော်ဖီခွက်ပေါင်း ၃၆၀၄ ခွက်ကို အသုံးပြုပြီး ပုံဖော်ထားပါတယ်။ အဲဒီခွက်ပေါင်း ၃၆၀၄ ခွက်စလုံးမှာ မတူညီတဲ့ နို့ပမာဏတွေ ရောစပ်ပြီး မတူညီတဲ့ အရိပ် တွေ ပုံစံတွေ ရရှိအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ အလွန်ကို စိတ်လှုပ်ရှား အံ့သြစရာပါပဲ ။ အနုပညာဆိုတာ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ လည်းဖန်တီးလို့ ရတယ်ဆိုတာ ..............................။
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို (၁၁း၀၀ ည ၁၉.၁၁.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 11:44 AM 15 comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:04 AM7comments: